Indawo yokunyusa i-Ingroud | KwiChina Ingroud lift Abavelisi, abaXhasi
Isithuba esinye sokuphakamisa ingroud L2800 (A) exhotyiswe ngengalo yohlobo lwe-telescopic yengalo yenkxaso
Ukuxhotyiswa ngohlobo lwe-telescopic yebhulorho yokuxhasa ukuhlangabezana neemfuno zeemodeli ze-wheelbase ezahlukeneyo kunye neendawo zokuphakamisa ezahlukeneyo. Amacwecwe okutsala kumacala omabini engalo yenkxaso afikelela kuma-591mm ububanzi, okwenza kube lula ukufumana imoto kwizixhobo. I-pallet ixhotyiswe ngesixhobo esinqabileyo sokulahla, esikhuselekileyo.
Isithuba esisodwa sokunyusa i-L2800 (A-1) exhotyiswe ngengalo ye-X yohlobo lwenkxaso ye-telescopic
Icandelo eliphambili liphantsi komhlaba, ingalo kunye nekhabhathi yolawulo lombane zisemhlabeni, ezithatha indawo encinci kwaye zilungele iivenkile ezincinci zokulungisa kunye nobuhle kunye namakhaya ukulungisa ngokukhawuleza nokugcina izithuthi.
Ifakwe X-uhlobo telescopic inkxaso ingalo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo iimodeli wamavili kunye neendawo ezahlukeneyo nokuphakamisa.
Isithuba esinye sokunyusa i-ingroud lift L2800 (A-2) efanelekileyo yokuvasa imoto
Ixhotyiswe ngohlobo lwe-X-telescopic arm arm ukuhlangabezana neemfuno zeemodeli ze-wheelbase ezahlukeneyo kunye neendawo zokuphakamisa ezahlukeneyo. Emva kokuba izixhobo zibuyile, ingalo yenkxaso inokumiswa emhlabeni okanye itshone emhlabeni, ukwenza umphezulu wengalo yenkxaso igcinwe igungxulwa ngumhlaba. Abasebenzisi banokuyila isiseko ngokweemfuno zabo.
Isithuba esinye sokunyusa i-ingroud lift L2800 (F) efanelekileyo yokuhlamba imoto kunye nokugcinwa ngokukhawuleza
Ixhotywe ngengalo exhasayo exhasa ingalo yesithuthi. Ububanzi bengalo exhasayo yi-520mm, okwenza kube lula ukufumana imoto kwizixhobo. Ingalo exhasayo yambathiswe nge-grille, ene-permeability elungileyo kwaye inokucoca ngokucokisekileyo isisu semoto.
Isithuba esisodwa sokunyusa i-L2800 (F-1) ngesixhobo sokhuseleko lwamanzi
Ixhotyiswe ngengalo exhasayo yohlobo lwebhulorho, Ingalo exhasayo yambathiswe ngegrili, enokuthambeka okuhle kwaye inokucoca ngokucokisekileyo isisu semoto.
Ngexesha lokungasebenzi, iposti yokuphakamisa ibuyela emhlabeni, ingalo yenkxaso iyagungxulwa ngumhlaba, kwaye ayithathi ndawo. Ingasetyenziselwa omnye umsebenzi okanye ukugcina ezinye izinto. Kukulungele ukulungiswa okuncinci kunye neevenkile zobuhle.
Isithuba esinye sokuphakamisa ingroud L2800 (F-2) efanelekileyo kumavili axhasayo
Ixhotyiswe ngeplanga yeebhulorho ezine zebhulorho yokuphakamisa amavili esithuthi ukuhlangabezana neemfuno zezithuthi zevili elide. Izithuthi ezinamavili amafutshane kufuneka zipakishwe embindini wobude be pallet ukunqanda ngaphambili nangasemva imithwalo engalinganiyo. Ipallet yambethe i-grille, enokungena kakuhle, enokucoca i-chassis yesithuthi kwaye inyamekele ulondolozo lwesithuthi.
Ukuxhotyiswa ngengalo yenkxaso ejikelezayo yokuphakamisa isondo lesithuthi.
Umgama osembindini phakathi kwezi zithuba zimbini zokuphakamisa yi-1360mm, ke ububanzi beyunithi ephambili buncinci, kwaye isixa sokomba izixhobo sisiseko, esigcina utyalo-mali olusisiseko.
Iposti ephindwe kabini yokunyusa ingroud L4800 (E) ixhotyiswe ngengalo yohlobo lwebridge
Ixhotyiswe ngengalo exhasa uhlobo lwebhulorho, kwaye zombini iziphelo zixhotyiswe ngebhulorho edlulayo yokuphakamisa umbhinqo wesithuthi, olungele iimodeli ezahlukeneyo zamavili. Ingubo yesithuthi inxibelelana ngokupheleleyo nepallet yokunyusa, isenza ukuba ukuphakamisa kuzinze.
Iposti ephindwe kabini yokunyusa i-L6800 (A) enokusetyenziselwa ulungelelwaniso lwamavili amane
Ukuxhotyiswa ngohlobo lweplastikhi eyandisiweyo exhasa ingalo, ubude buyi-4200mm, ixhasa amavili emoto.
Ifakwe ikona ipleyiti, icala isilayidi, kunye netroli yokuphakamisa yesibini, efanelekileyo ekubekeni kwevili ezine kunye nokugcinwa.
I-LUXMAIN okwangoku kuphela komenzi wokuphakanyiswa kokufakwa ngaphakathi kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda eTshayina. Ukujongana nemiceli mngeni yobuchwephesha beemeko ezahlukeneyo zobume be-geological kunye nenkqubo yokuyilwa, sinika umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zethu zobuchwephesha kwi-hydraulic kunye ne-mechatronics, kwaye siqhubeke nokwandisa iinkalo zesicelo sokunyuswa okungaphakathi ukuhlangabezana neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zesicelo. Iphuhlise ngokulandelelana umsebenzi ophakathi kunye nomsebenzi onzima osisigxina oshiyekileyo kunye nohlobo lwesahlulo sasekunene, iiposti ezine ngaphambili kunye nohlobo lwasemva olwahluliweyo, ezinezithuba zangaphambili nangasemva zokwahlula okunyusiweyo okungaphakathi okulawulwa yi-PLC okanye inkqubo ye-hydraulic emsulwa.
Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Isilinda esibambeleyo esinye, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi,